Dhagaxa loo yaqaan 'Turquoise Stone' waa madadaalo madoow, buluug illaa cagaaran - Video
Waxaan ka sameysannaa dahab la isku qurxiyo oo dhagax turquoise ah siddo, silsilad, hilqado, jijin ama suumanka.
Iibso dukaanka dabiiciga ah turquoise dabiiciga ah
Turquoise dabiiciga ah waa muraayad, buluug iyo macdanta cagaaran. Waa phosphate hydrated of copper iyo aluminium. oo leh qaacida kiimikada CuAl6 (PO4) 4 (OH) 8 · 4H2O. Turquoise waa naadir iyo sidoo kale qiimo leh fasalada ugu fiican. Waxaa la qiimeeyay sida dhagax dhagax ah. Iyo dhagax saldhig ah kumanaan sano. Iyadoo ay ugu wacan tahay midabka buluuga ah ee khaaska ah. Waqtiyadii ugu dambeeyay, waa la dhimay. Sida badankood oo kale. Hordhac ahaan suuqgeynta daaweynta, sidoo kale takhaatiirta iyo takoorka.
Waxyaabaha ugu fiican ee turquoise waxay gaaraan ugu badnaan Mohs adag oo ka hooseysa 6. Wax yar ka badan muraayadda daaqadda. Astaanta asalka ah macdanta cryptocrystalline. Turquoise marnaba marna ma sameysna crystals hal. Dhammaan hantidooduna waa kuwo aad u kala duwan. Imtixaanka raajada x-ray ayaa muujinaya nidaamkeeda kondhom si uu u noqdo triclinic. Iyadoo lakabka hooseeya waxay ka timaadaa 2.60-2.90. Iyada oo udhaxaad ah, sifooyinkaasi waxay ku xidhan yihiin hadhuudhkii hadhuudhka. Kabar-celiyuhu wuxuu caadi ahaan waxyeello u geystaa. Xaqiiqaduna waa caadi. Laakiin waxaa laga yaabaa in uu yahay semitranslucent qaybo khafiif ah. Midabkuna waa bedel sida maaddooyinka kale ee macdanta. Ka soocista cadaan si cad oo buluug ah si cagaar ah. Iyo cagaar cagaaran oo cagaar ah oo cagaar ah. Midabkuna wuxuu ka yimaadaa copper idiochromatic. Inkasta oo cagaarntu ay noqon karto natiijada nacasta birta, beddesho aluminiinka, ama sidoo kale fuuqbax.
Heerka jimicsiga ee turquoise waa qiyaasta 1.61 ama 1.62. Tani waa qiimaha celceliska loo arko sida hal akhris oo ku saabsan mira-hawleedka mira-hawleedka. Sababtoo ah dabeecadda polycrystalline ku dhowaad ah ee dhagaxa. Akhrinta 1.61-1.65, iyo sidoo kale 0.040. Jawaabta nuxur ahaaneed waxay ka timaaddaa keli keli keli ah. Waxaa sidoo kale laga heli karaa muuqaal nuugid ah oo leh sawir-gacmeed oo gacanta lagu qaato. Waxay muujineysaa xariiqa 432 nm iyo sidoo kale koox daciif ah 460 nm. Marka la eego iftiin ultraviolet wakhti dheer, waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood fluoresce cagaaran, sidoo kale caleemo jaalle ah ama dhalaalaya, waa qotodheer ka hoos mareenka ultraviolet iyo raajada.
Turquoise waxay kobcisaa is-fahamka waxayna caawisaa xalinta dhibaatooyinka hal abuurka ah. Waa astaan ​​saaxiibtinimo, waxayna kicisaa jacaylka jacaylka. Qalabka loo yaqaan 'Turquoise' wuxuu ku caawiyaa nuugista nafaqooyinka, wuxuu kobciyaa nidaamka difaaca jirka, wuxuu kiciyaa cusbooneysiinta unugyada, wuxuuna bogsadaa jirka oo dhan.
Waa maxay sumurud tayo wanaagsan leh?
Bisbee turquoise waxaa loo yaqaanaa inuu yahay dhagaxa ugu tayada wanaagsan uguna wanaagsan ee waligiis ka soo baxa dhulka Waqooyiga Ameerika. Dhagaxu wuxuu ka socdaa iftiin ilaa buluug mugdi ah iyo iftiinka ilaa cagaarka madow midabkiisa, hase yeeshe, kala duwanaanta midabka buluuga ah ayaa xukuma.
Muxuu u fiican yahay dhagaxa loo yaqaan 'turquoise Stone'?
Sidoo kale waa dhagax xasilloon oo sababi kara degganaanta gudaha isla markaana kor u qaadi kara jinniyo yaraaday. Kaliya ma aha inay turquoise gacan ka geysan doonto sidii maskaxda looga saari lahaa shucuurta xun, waxaa sidoo kale la sheegay inay taageerto sunta jirka. Sababtoo ah waxay caawineysaa xasilloonida iyo ilaalinta, turquoise waa dhagax weyn oo weheliya fekerka.
Dhagax noocee ah ayaa laga helaa sumurud?
Turquoise-ka waxaa laga helay dhagxaanta bacalt-daboolan, ama markii horeba waa la dulmariyay. Waxaa jira shaqooyin naxaas iyo bir ah oo gobolka ka jira.
Waa maxay sumurudda dhif ah?
Lander buluugga buluugga ah wuxuu ka socdaa miino ku taal Lander County, Nevada, USA markii ugu horreysayna waxaa la sheegtey 1973. Waxay soo saartay qaar ka mid ah caarada ugu quruxda badan caaro-caarada weligeed la helay. Waxaa loo arkaa kan ugu yar iyo dhagaxa ugu qiimaha badan.
Sideed u kala garan kartaa farqiga u dhexeeya turquoise-ka dhabta ah iyo dahabka saxaaxa been abuurka ah?
Giraanta Turquoise, silsilad, hilqado, jijin ama santuuqa ayaa leh midabyo kala duwanaan ah, laakiin dhagxaanta midabbada leh waxay yeelan doonaan xarriiqyo dhaadheer, halkaasoo dheehu ku soo uruuriyay dildilaaca dabiiciga ah ee dhagaxa.
Ku taabo ilkahaaga. Waxay u egtahay wax qariib ah laakiin way shaqaysaa. Turquoise waxay leedahay cufnaan caajis ah marka aad ka taabato ilkahaaga. Dhagax been abuur ah ayaa ilkahaaga ugu eg sida caag ama galaas.
Turquoise-ka dhabta ahi ma qaalibaa?
Qiimaha dhagxaanta wuxuu u dhexeeyaa $ 0.05 ilaa $ 1000 karatkiiba iyadoo kuxiran tayada. Farqiga u dhexeeya tayada iyo dhagaxyada ka jaban waxay noqon kartaa wax yar oo jahwareer ku ah dadweynaha aan khabiirka ku ahayn
Qurxinta midabkoodu yahay `` Purple turquoise '' ma runbaa?
Ma jiro midab dabiici ah oo midabkeedu yahay buluug dabiici ah, silsilad, hilqado, jijin ama shaati. Waxay noqon kartaa dhagaxyo dib loo dhisi karo, halkaas oo dhagaxa fuuqbaxay uu ku qotomo kuna milmay cusbi casaan ah, oo ka samaysan midab guduud ah oo ku jira badeecad la xoojiyay.
Sideed u nadiifin kartaa midabka loo yaqaan 'turquoise'?
Ku nadiifi burush caday oo nadiif ah, jilicsan-biyo nadiif ah. Si tartiib ah ugu xoq dusha sare dhagaxa burushka. Qalabka oo dhan si fiican ugu qalaji tuwaal jilicsan. Ku qurxin dahabka, gaar ahaan qaybaha birta, maro nadiifiya dahabka.
Fartahee ayaad xirataa dharka loo yaqaan 'turquoise'?
Strone-ka waxaa loogu talagalay meeraha Jupiter oo sidoo kale loo yaqaan Guru ee Brihaspati waana inuu ku xirnaadaa farta Index oo uu xukumo Jupiter iyo farta giraanta oo qorraxda lagu xukumo.
Turquoise miyuu keenaa nasiib wacan?
Waxay ku xirneyd jirka ama waxaa loo adeegsaday xafladaha, badiyaa waxay muujineysaa ilaaha samada oo ku nool dhulka. Dhagaxa ayaa la sheegay inuu leeyahay awoodo badan. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bogsiin iyo dhagax ilaalin oo xoojiya geesinimada qofka xiran. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay soo jiidaneyso jacayl, saaxiibtinimo, lacag iyo nasiib.
Turquoise miyuu qaali yahay mise mid jilicsan?
Waxaa jira kaliya 4 dhagax oo qaali ah: Dheeman, ruby, safayr iyo emerald. Sidaa darteed waa dhagax dhagax qaali ah oo qaali ah.
Cowsku ma dahab baa ku jira?
Matxafka caara-caaradeed ee laga helo dhagxaanta qaarkood waxaa ku jira dahab, midabo kala duwan oo bunni ah, iyo madow, kuwaas oo sameeya qaab isku dhafan oo mareeg ah oo dhan iftiinka, midabka buluug-cagaarka ah Sababtoo ah waxaa laga heli karaa dhagaxyo kala duwan oo martida loo yahay oo ay ku jiraan chert, shale iyo quartz, gabal kastaaba shaqsi gaar ah ayuu gaar u yahay.
Turquoise ma dhalaalaysaa?
Dhagaxa qaaliga ahi waa mid jilicsan oo dabiici ah wax dhalaalaya. Mararka qaarkood waxaa lagu miiraa saliid caag ah si kor loogu qaado dhalaalkeeda loona kordhiyo xasilloonideeda. Dhagaxu inta badan wuxuu ka kooban yahay walxaha dhalaalaya oo dhalaalaya, ama waxaa ku jiri kara xididdada oksaydhka madow ee dhex socda.
Saxarada Afrika ma dhabbaa?
Xaqiiqdii maahan dhagaxa Afrika ee dareenka dhaqanka. Taabadalkeed, waa nooc ka mid ah yasbid laga qodo Afrika, waxaana badanaa lagu daaweeyaa si loo siiyo midabka buluug-cagaarka ah ee hodanka ah ee aan ka jecelnahay dhagx dhaqameedka.
Ma jiraa sumacad been abuur ah?
Dhagaxu waa mid ka mid ah kuwa sida caadiga ah loo been abuurto ama looga daydo macdanta suuqa ku jirta, iyadoo aqlabiyaddiisu tahay midkood ama midabkiisu midabkiisu dheehan yahay ama toos u toosiya caaga!
Turquoise-ka dhabta ahi miyuu beddelaa midabka?
Waa iskudhis ay kujiraan biro sida aluminium, naxaas ama bir. Biyaha iyo saliidu waxay sababi karaan qaar ka mid ah birahan inay oksijiiyaan, ama haddii si kale loo dhigo miridhku. Sababtoo ah qiiqa, dhagxaanta ayaa runtii beddeli kara midabka. Dhagxaanta buluugga ah ee ay ku jiraan naxaantu waxay ka beddeli karaan buluug khafiif ah una beddelayaan cagaar madow.
Waa maxay macmacaanka isku dhafan ee loo yaqaan 'turquoise'?
Isku-darka ama dib-u-soo-celinta turquoise waxaa laga sameeyaa qaybo yaryar oo dhagax ah oo lagu qaso polymer waxaana lagu tuuraa qaybo qaab u eg. Dhagax si fiican u burbursan iyo waxyaabo aan turquoise ahayn ayaa mararka qaarkood lagu daraa. Baloogyada ayaa markaa lagu jajabiyaa qaybo yaryar oo loo isticmaalo in lagu jaro cabochons, kuul iyo waxyaabo kale.
Ma xun tahay in la iibsado sumoobo xasilloon?
Dhagax xasilloon ma xuma. Waxay leedahay faa'iidooyinkeeda. Xaqiiqdii, dadka qaar ayaa doorbidaya. Daaweynta ka dib, dhagax dhagax ah oo xasilloon ayaa ka sii adag oo uma badna inuu jabo ama dillaaco. Dhagaxu hada uma sii daayo, sidaa darteed ma soo nuugayo dareerayaasha ama saliida midabkuna wuu xiran yahay, si ka duwan dhagxaanta dabiiciga ah ee midabku isbeddeli karo, ama sii qoto dheer karo.
Ma jiraan wax la mid ah sida dahabka cagaarka ah ee loo yaqaan 'turquoise dahabka'?
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaa jira dhammaan noocyada buluug, caddaan, casaan, oranji, casaan, iwm, siddooyin turquoise, silsilad, hilqado, jijin ama shaati ka soo baxa Shiinaha oo lagu calaamadeeyay dhagaxyo xasilloon. Qaar ka mid ah waxay leedahay xariiqyo midabkeedu yahay midab ama madow, matrix been abuur ah oo dushiisa ah, inta badan badeecadani waa mid la madoobaaday magnesite ama wax noocaas ah, oo aan dhab ahayn.
Turquoise, laga soo bilaabo USA
Tags Turquoise, Yellow